Converter | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ကျွန်တော်တို့ Picture လေး တွေကို Exe File, Video Format Files , Screen Saver Files များ အဖြစ် အလွယ် တကူ Slide Show ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ Full Version လေး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
ကျွန်တော် အောက်မှာ ပုံထပ်ထည့် ပေးထား ပါတယ်။ Video Editor tool လေး တစ်ခုပါ ပါဝင် ပါတယ်။ အထဲမှာ Patch File လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ Folder လေးထဲကို ကူးထည့် ပေးလိုက်ရင် Full Version လေး ဖြစ်ပါပြီ။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 16 MB ရှိပါတယ်။
ကဏ္ဍ Converter, Video-software
Video to MP3 Converter 1.5.3 for Android
Android ဖုန်း ကိုင်ထားသော ဘော်ဒါများ ခဏ ခဏ လာတောင်း ကြတဲ့ Video ကနေ MP3 လေး လုပ်လို့ ရတဲ့ Application ရှိရင် တင်ပေးပါ ဆိုလို့ ဒီတခါတော့ ဘော်ဒါတို့ ဆန္ဒ ပြည့်ဝ သွားအောင် Video ကနေပြီး MP3 လုပ်လို့ ရတဲ့ application တစ်ခု တင်ပေး လိုက်ပါပြီ။
Android ဖုန်း ကိုင်သူများ အနေဖြင့် mp4 ကနေ Mp3 ပြောင်းချင်တယ် ဆိုရင် PC ကိုပဲ အားကိုး စရာ မလိုတော့ ပါဘူး..အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ App ကတော့ မိမိ ဖုန်းထဲ မှာပဲ.. mp4 တွေကို mp3 သို့ ပြောင်းနိုင် ပါတယ်...
ဒီ App ထဲမှာ အဓိက လုပ်ဆောင်နိုင် တာတွေ ကတော့
- Video များကို mp3 format သို့ပြောင်းခြင်း
- Video Format မျိုးစုံကို ပြောင်းနိုင်ခြင်း
- Audios format တော်တော် များများ support ခြင်း ( ဥပမာ..mp3, AAC, OGG အစရှိသည့် )
- ခေါင်းစဉ်များကို တည်းဖြတ်နိုင်ခြင်း (Artist, Album, title) စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်..
- ဖိုင်းဆိုဒ်ကတော့9.39MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.2 အထက်ရှိ ဖုန်းများ အားလုံးမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Android, Converter, Phone Application
ဗီဒီယိုတွေကို Converter ပြုလုပ် ချင်သူများ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆော့ဝဲလေး တစ်ခုပါ။
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဗွီဒီယို, အသံ, နှင့် ကာတွန်း ရုပ်ပုံများ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ်။ အဓိ
ကတော့ 3D ဗီဒီယို ဖန်တီးနိုင် တာ ပါဝင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ပြီး ImTOO Video Converter HD ဗီဒီယို တို့ကို convert လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး Video
H.264 / MPEG-4 AVC, AVCHD (* .m2ts, * .mts), MKV, HD ကို WMV, MPEG2 / MPEG
-4 TS HD ကို, ဗွီဒီယိုများ convert AVI, MPEG-4, WMV, DivX, H.264 / AVC နှင့် ဗွီဒီယိုများ
မှ အသံနဲ့ ဓါတ်ပုံ တွေကို အမျိုးမျိုး အထွေထွေ ဗီဒီယို အမျိုးအစား တို့ကိုပြောင်း လဲနိုင်ပါတယ်။
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter Pro 1.25
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter Pro 1.25 | 2.94 MB
Updates: official site does not provide any info about changes in this version tell now
Home page : http://www.freeyoutubedownloadermp3converter.com/
ကဏ္ဍ Converter, Download-Manager
MM Font Converter v3.0 apk
Unicode ကနေ Zawgyi, Zawgyi ကနေ Unicode font စာသားတွေကို convert လုပ် ပြောင်း
လဲပေးမယ့် MM Font Converter v3.0 Updated ထွက်ရှိ လာပါတယ်.. apk ရေးသားသူ မြန်
မာ Developer Myat Min Soe ဖြစ်ပါတယ်..
Apk file size 862KB ရှိပြီး Android OS Version4.0နှင့် အထက် ရှိထားတဲ့ ဖုန်းများမှာ ထည့်
သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်... ။
An offline converter tool for Zawgyi to Unicode and Unicode to Zawgyi. Can use easily
- Notifications when copying texts
- Better converter library
Size : 862k
ကိုဇော်သွင် နဲ့ Developer Myat Min Soe ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်.
ကဏ္ဍ Android, Converter, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
Convert Everything Pro ဆိုတာ Android ပေါ်မှာ အတိုင်း အတာ ယူနစ် တွေကို ပြောင်းပေးတဲ့
App ဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် Convert Everything Pro 1.0.112 apk ကို Life Time Hack
Convert Everything Seriously Converts Any Unit of Measurement to Another – Lifehacker
Convert All the Things with Convert Everything – XDA Developers